प्रस्फुटन: संझिएर तिमीलाई !!
संझिएर तिमीलाई !!
रोएं धेरै जीन्दगीमा संझिएर तिमीलाई
आंशु धेरै बगाइरहें संझिएर तिमीलाई !
तिमी तिम्रै सपनामा फकृएर फुलेकी छ्यौ
ब्यर्थै रोएं जीन्दगीमा संझिएर तिमीलाई !
मिर्मिरेको घाम सरी पोख्यौ रंग यत्र तत्र
लत्पतिदै त्यै रंगमा संझिएर तिमीलाई !
फूल जस्तै सोची तिम्लाई सुवास खोजीरहे
अधेरी को जुनकिरी संझिएर तिमीलाई !!
Posted by Prasfutan at 9:11 AM
आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान पहिलेभन्दा कम - सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा यसअघि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेपनि त्यो हासिल नहुने र अब वृद्धिदर ५ दशमलब ९ प्रतिशतमात्रै हुने आकलन गरेको छ।